China 410 410s ashisayo engagqwali ikhoyili insimbi Ukwakha futhi Factory | I-Huaxiao
Amandla we-Sino Stainless Steel mayelana 410 410s Kuyashisa isongwe insimbi engagqwali ikhoyili , 410 410s HRC
Incazelo elula mayelana Insimbi engagqwali yeFerritic
Imvamisa insimbi engenasici ye-ferritic ifaka i-409、410、410S, 420, 430, 430Ti、439、441, 434、436、444 , 446、445/447
Isigaba 1 (409 409L noma 410 410s). Lolu hlobo lwensimbi lunokuqukethwe okuphansi kakhulu kwe-chromium kuwo wonke ama-steels angenazinsimbi futhi yingakho lushibhile futhi lufaneleka kakhulu ukusetshenziswa ezindaweni lapho kungekho khona ukugqwala noma ukugqwala okuncane nalapho kukhona ukugqwala kwasendaweni okuncane. Insimbi engagqwali yohlobo lwe-409 ekuqaleni yayakhelwe ukungafakwanga uhlelo lokukhipha izimoto (ukubola kwangaphandle). Uhlobo lwensimbi engenasici yohlobo lwe-410 luvame ukusetshenziswa ezitsheni, emabhasini nakuma-limousine wamabanga amade njengohlaka lwangaphandle lwama-LCD monitors.
Isigaba 2 (Uhlobo 430). Ingenye yezinsimbi ezingenasici ezisetshenziswa kakhulu ze-ferritic futhi iqukethe izinga eliphakeme le-chromium. Inokumelana okuhle nokugqwala futhi izakhiwo zayo eziningi ziyafana nezika-304. Kwezinye izinhlelo zokusebenza, ingathatha indawo yensimbi engenasici engama-304, futhi ijwayele ukusetshenziswa ezindlini enokumelana nokugqwala okwanele. Ukusetshenziswa okujwayelekile kubandakanya imigqomo yomshini wokuwasha, amapaneli angaphakathi, njll. I-430 ejwayelekile ivame ukusetshenziselwa ukufaka esikhundleni sama-304 ezakhiweni zasekhishini, imishini yokuwasha izitsha, izimbiza namabhodwe.
Isigaba 3 (kufaka phakathi i-430Ti, 439, 441, njll.). Uma kuqhathaniswa nesigaba sesibili, lolu hlobo lomkhiqizo lunokuhleleka okuhle nokuhleleka. Ezimweni eziningi, ukusebenza kwayo kungcono kakhulu kune-304. Ukusetshenziswa okujwayelekile kufaka phakathi amasinki, amashubhu okushintshanisa ukushisa (imboni kashukela, amandla, njll.), Izinhlelo zokukhipha izimoto (ezinde ngaphezu kuka-409), nezinsimbi emishinini yokuwasha. IBanga lesi-3 lingashintsha ngisho nama-304 ngezinhlelo zokusebenza eziphakeme.
Isigaba 4 (kufaka phakathi izinhlobo 434, 436, 444, njll.). Lawa mabanga akhulisa ukumelana nokugqwala ngokungeza i-molybdenum. Izicelo ezijwayelekile zifaka amathangi amanzi ashisayo, izifudumezi zamanzi elanga, amasistimu okukhipha izimoto, amaketheni kagesi okushisa kagesi kanye nezinto zehhavini le-microwave, imichilo yokunquma izimoto, namapaneli angaphandle. Ukumelana nokugqwala kwensimbi engu-444 kufana no-316.
Isigaba 5 (kufaka phakathi u-446, 445/447, njll.). Lawa mabanga athuthukisa ukumelana nokugqwala nokumelana ne-oxidation ngokungeza i-chromium eningi futhi equkethe i-molybdenum. Leli banga linokumelana nokugqwala okungcono nokumelana ne-oxidation kunama-316. Ukusetshenziswa okujwayelekile kuyizindawo ezingasogwini nezinye ezingamelana nokugqwala kakhulu. Ukumelana nokugqwala kwe-JIS 447 kuqhathaniswa nokwenziwe nge-titanium yensimbi.
Langaphambilini Ikhoyili yensimbi engagqwali engu-321 eshisayo
Olandelayo: Ikhoyili yensimbi engagqwali engu-430 eshisiwe